Sports – XB Media Myanmar
အောင်သူ ပြောင်းမယ့် အသင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာ စိုင်း
December 29, 2019 Bestie_Author
အောင်သူကတော့ လက်ရှိမှာ ပြည်ပကလပ်အသင်းတစ်သင်းသင်းထံ ရောက်ရှိထား နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ ရတနာပုံ ကစားသမားအဖြစ်သာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ရတနာပုံအသင်းက မြန်မာ့လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး အောင်သူအနေနဲ့ လာမယ့်နှစ် ဘော လုံး ရာသီသစ်မှာ ထိုင်းလိဂ်-၁ ကလပ် Police Tero အသင်းကို ရောက်ဖို့ များတယ်လို့ ရတ နာပုံအသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်းက DuwunSportsကို ဖြေကြားခဲ့ပါတ ယ်။ “အောင်သူက အသင်းဟောင်း Police Tero ကိုပြန်ရောက်ဖို့ များနေတယ်။အတည်တောာ့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ စကားပြောနေတယ်။”လို့ ဒေါက်တာစိုင်းက ပြောလာတာပါ။ အောင်သူ အနေနဲ့ ထိုင်းလိဂ်-၁ ကို ပထမဆုံး သွားရောက် ကစားခဲ့တဲ့ အသင်းက Police Tero အသင်းဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးနှစ်မှာ Police Tero အသင်းက လိဂ်-၂ ကို တန်းဆင်းသွား လို့ ထိုင်းထိပ်တန်းအသင်းကြီးတစ်သင်း ဖြစ်တဲ့ မြောင်တောင်အသင်းကို ဆက်လက်ပြော င်းပြီး လိဂ်-၁မှာ ဆက်လက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အခုနှစ်မှာတော့ Police Tero အသင်းကလိဂ်-၁ကို တန်းပြန်တက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အောင်သူ့အနေနဲ့ ထပ်မံပြီး အငှားသွားရောက် ကစားဖို့ များနေတာပါ။ “အောင်သူက ရတနာပုံနဲ့စာချုပ်ရှိတော့ အငှားနဲ့ပဲသွားဖို့ ရှိပါတယ်။”လို့…
ထိုင္းႏိုင္ငံက ပရိသတ္ (၃၅၀၀၀) ေရွ႔ မွာ ၿပိဳင္ဘက္ကို ပထမအခ်ိီမွာ အလံ ထိုး အႏို င္ယူလိုက္တဲ့ ျမန္မာ့လက္ေ ၀ွ႔ေက်ာ္ သေျပညိဳ(ရုပ္/သံ) …
December 6, 2019 Bestie_Author
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာက်င္းပေနတဲ့ ထိုင္းဘုရင့္ဖလား ဆီမီးဖိုင္းနယ္ပြဲစဥ္က ၆၄ ကီလိုဝိတ္တန္းမွာ သေျ ပညိဳကေန ကမ္ပူးခ်ား (ကေမာၻးီးယား) လက္ေဝွ႔သမားကို ပထမအခ်ီမွာဘဲ အလဲထိုးအႏို င္ရရွိ သြားတဲ့အတြက္ ဗိုလ္လူပြဲကိုတက္ေရာက္သြားၿပီးျဖစ္တယ္ ႏိုင္ငံစုံက လက္ေဝွ႔သမားေတြပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ထိုင္းဘုရင့္ဖလား (၂၀၁၉) ပတ္လည္ပြဲစဥ္ေ တြကို ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာ လိုက္လံက်င္းပေနတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးဗိုလ္လုပြဲစဥ္ေတြကိုေတာ့ ျမ်ိဳ ပေတာ္ဘန္ေကာက္မွာက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ Video File ၾကည့္ရန္။ ဒီကေန႔ညပြဲစဥ္ေတြက္ုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က နေရစြမ္ အားကစား ကြင္း မွာ က်င္း ပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Unicode ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ ထိုင်းဘုရင့်ဖလား ဆီမီးဖိုင်းနယ်ပွဲစဉ်က ၆၄ ကီလိုဝိတ်တ န်းမှာ သပြေညိုကနေ ကမ်ပူးချား (ကမ္ဘေားီးယား) လက်ဝှေ့သမားကို ပထမအချီမှာဘဲ အလဲထိုးအနိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက် ဗိုလ်လူပွဲကိုတက်ရောက်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံစုံက လက်ဝှေ့သမားတွေပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ထိုင်းဘုရင့်ဖလား (၂၀၁၉) ပတ်လည်ပွဲ စဉ်တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့မှာ လိုက်လံကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစဉ်တွေ ကိုတော့ မြျို ပတော်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
SEA Games မွာ သားျဖစ္သူ ေ႐ႊရ တဲ့ေန႔၊ ဖခင္က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ တဲ့ အျဖစ္
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဝူးရႉးလက္ေ႐ြးစင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Edgar Marvelo ဟာ SEA Games ၿပိဳင္ ပြဲမွာ သူ႔ဘဝရဲ႕ပထမဆုံး ေ႐ႊတံဆိပ္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္၊ ဖခင္ျဖစ္သူကေတာ့ မ်က္ဝါးထ င္ထင္ ဂုဏ္ယူမသြားခဲ့ရပါဘူး။ သူဟာ သားျဖစ္သူ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တဲ့ေန႔မွာပဲ ေသဆုံးသြားခဲ့တာပါ။ Edgar ဟာ Gunshu နဲ႔ Daoshu ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ ေ႐ႊရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ သူဟာ ဖခင္ေ သဆုံးေၾကာင္း သိသြားတဲ့အတြက္ မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ လိုက္လာခဲ့တဲ့ လက္ေ႐ြးစင္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ နည္းျပေတြလည္း ငိုခဲ့ရပါတ ယ္။ Edgar ဟာ လက္ေ႐ြးစင္နည္းျပရဲ႕ ခြင့္ျပဴမႈနဲ႔အတူ ဖခင္ရဲ႕နာေရးကိုမီဖို႔ ေလေၾကာင္းခရီးနဲ႔ အင္ ဒိုနီးရွားကို ျပန္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ရရွိတဲ့ေ႐ႊတံဆိပ္ေတြကို ဖခင္ရဲ႕ေခါင္းတလားမွာ ဂါရဝါျပဳတပ္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။သူရဲ႕အျဖစ္ကို အင္ဒိုလူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳသူေတြက စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း စာေ ရးသား ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ Edgar က သူရဲ႕ဖခင္ ေသဆုံးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ” အေဖ့ကို ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ ခဲ့ပါၿပီ … အခုဆို သူ ကြၽန္ေတာ္ရခဲ့တဲ့ ဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္ပါၿပီ … “လို႔ ေရးသားခဲ့ ပါတ ယ္။သူဟာ…
အိမ္ရွင္ဖိလစ္ပိုင္ကို အနိုင္ယူၿပီး ဖိုင္ နယ္ တက္သြားတဲ့ ျမန္မာပိုက္ေ က်ာ္ျ ခင္းအသင္း
December 5, 2019 Bestie_Author
2019 Sea Games ၿပိဳင္ပြဲ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္တြဲ (အသင္းလိုက္) ပြဲ စဥ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ကို ယေန႕ နံနက္ပိုင္း မွာ ကစားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္းက ဖိလစ္ပိုင္ အသင္း ကို အနိုင္ရခဲ့လို႔ ဖိုင္နယ္ကိုတက္သြားခဲ့ၿပီလို႔သိရပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ ဗိုလ္လု ပြဲကိုေတာ့ ယေန႕ ညေန ပိုင္းမွာဆက္ကစားသြားမွာျ ဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းအေနနဲ႕ နိုင္ငံအတြက္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုရယူေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ ဆုမြ န္ေကာင္းေတာင္းေပးၾကပါအုံးေနာ္ Fighting MYANMAR! Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္ 2019 Sea Games ပြိုင်ပွဲ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲ (အသင်းလိုက်) ပွဲစဉ် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်း မှာ ကစားခဲ့ပြီး မြန်မာအသင်းက ဖိလစ်ပိုင် အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့လို့ ဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဗိုလ်လု ပွဲကိုတော့ ယနေ့ ညနေ ပိုင်းမှာဆက်ကစား သွား မှာဖြစ် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာပိုက်ကျော်ခြင်းအသင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုရယူပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဆု မွန် ကောင်းတောင်းပေးကြပါအုံးနော် Fighting MYANMAR!
“ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းပွဲမှာ မြန်မာနို င်ငံအတွက် ပထမဆုံးရွှေတံဆိပ်ကို အရယူပေးခဲ့တဲ့ မအိန္ဒြေဖူး”
December 4, 2019 Bestie_Author
လတ်တလော ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ အကြိ မ်(၃၀)မြောက် ဆီးဂိမ်းပွဲကြီးမှာတော့ မြန်မာ့အားကစားလောကအနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ရွှေ တံ ဆိပ်ဆုကြီးကို အရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင် ငံ ကိုယ်စားပြုကစားဖြစ်တဲ့ မအိန္ဒြေဖူးက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားနစ် အားကစားနည်းနဲ့ ရွှေ တံဆိပ်ဆုကိုအရယူပေးခဲ့တာပါ။ အားနစ် အားကစားနည်းဟာဆိုရင် လက်ရှိအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နို င်ငံရဲ့ ရိုးရာကိုယ်ခံပညာရပ်အားကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တုတ်၊ဓား စတဲ့ အရာတွေနဲ့ယှ ဉ်ပြို င်လို့လည်း ရတဲ့အပြင် လက်နက်ကိရိယာမပါဘဲ လက်ချည်းသက်သက် တိုက်ခိုက်ရတဲ့ အားကစားနည်း တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒြေဖူးဟာ ဒီနှစ်ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာ မြန်မာအား က စားအဖွဲ့အတွက် ပထမဦးဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုကို အားနစ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်တော် အပြပြိုင်ပွဲကနေ ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင့်(၇) နေရာအထိကို တက်လှမ်းနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာ ပဲဖြ စ်ပါတယ်။။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့ ရွှေတံဆိပ် (၁)ဆု၊ ငွေတံဆိပ်(၅)ဆုနဲ့ ကြေးတံဆိပ်(၁၈)ဆုရရှိထားပြီး စုစုပေါင်းဆုတံဆိပ် (၂၄)ဆုကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံ ဆိပ်ဆု အရယူပေးခဲ့တဲ့ မအိန္ဒြေဖူးကို ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေပြောပေးသွားပါဦး။ Source – Myanmar Football Fan Group CleoPaTra…
၂ပြဲဆက္အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္အသင္းအား ဂုဏ္ျပဳေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခ်ီးျမႇင့္
November 22, 2019 Bestie_Author
ယေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမ႓ာ့ဖလား ၂၀၂၂ ေျခစစ္ပြဲတြင္ မႏၲလာသီရိကြင္း၌ မြန္ဂိုလီးယား အသင္းအား (၁-၀) ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ေျခစစ္ပြဲ ႏွစ္ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲရခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ လက္ေ႐ြး စင္ အသင္းအား MNL အသင္းပိုင္႐ွင္မ်ားက က်ပ္သိန္း ၂၀၀ႏွင့္ MFF ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တာဂ်စ္ကစၥတန္ကိုအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပြဲအၿပီးမွာလည္း AYA Bankက ဂုဏ္ျပဳေငြ က်ပ္သိန္း၇ ၀၀ ကိုလည္းေပးအပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ကမ႓ာ့ဖလား ၂၀၂၂ ေျခစစ္ပြဲကို ယေန႔ညေနပိုင္းက မႏၲ လာ သီရိကြင္းမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္းက မြန္ဂိုလီးယားအသင္းကို ၁-၀ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရ႐ွိ ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာအသင္းဟာ ၂၀၂၂ ကမ႓ာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲ အုပ္စု (ခ) မွာ မြန္ဂိုလီးယားကို ၁ ဂိုး ဂိုးမ႐ွိ၊ ကာဂ်စၥတန္ကို ၇ ဂိုး ဂိုးမ႐ွိ၊ ဂ်ပန္အသင္းကို ၂ ဂိုး ဂိုးမ႐ွိနဲ႔ သုံးပြဲဆက္ ႐ႈံးနိမ့္ထားၿပီး ေနာက္ တာဂ်စ္ကစၥတန္အသင္းအား ၄-၃ဂိုးႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားအား၁-၀ တို႔ျဖင့္အိမ္ကြင္း၂ပြဲ ဆက္ တို က္…
သက်ထားသူူဇာ အိမ်ရှင် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ကစားမယ်အား ၂ ပွဲပြတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ Egypt International Series 2019 တွင် မြန်မာကြက်တောင်ကစားမယ် သက်ထားသူ ဇာက ဒီနေ့ မနက် (အီဂျစ်အချိန်) 9:40AM (မြန်မာအချိန်) 02:10 PM မှာ အိမ်ရှင် အီဂျစ် နိုင်ငံမှ ကစားမယ် Jana HESHAM MOHAMED ABDELKADER အား ၂၁-၄ ၊ ၂၁-၇ နှစ်ပွဲပြတ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ နောက်တစ်ဆင့်ပြိုင်ပွဲ(Quater Final) ကို ညနေပိုင်း (အီဂျစ် အချိန်) 5:40 PM (မြန်မာအ ချိန်) 1 0:10PMမှာဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ မနှှစ်က ပြိုင်ပွဲမှာတုန်းကလည်း ရွှေရခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပထမဆုံး ရွှေရခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ လဲ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်း ရွှေရအောင် သက်ထားသူူဇာက အကောင်းဆုံးကြိုးစား ယှဉ်ြ ပိုင်သွားမှာမို့ အားပေးကြပါဦး။ myanmar news market [Unicode] သက်ထားသူူဇာ အိမ်ရှင် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ကစားမယ်အား ၂ ပွဲပြတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ Egypt…
အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့အ တွက် တစ်ရက်စာဗေဒင်ဟော စာတမ်း မိဿရာသီဖွား >> ပျိုရွယ်သူများအဖို့ အချစ်ရေး ကံကောင်းမည်။ ပြိဿရာသီဖွား >> လာဘ်ရွှင်နေမည်။ မထေုနျရာသီဖှား >> စာပလေုပျငနျး၊ထျီလုပျငနျး အကြိုးပေးမညျ။ ကရကဋ်ရာသီဖွား >> အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းမည်။ သိဟ်ရာသီဖွား >> နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးထွက်ရကိန်းရှိသည်။ ကန်ရာသီဖွား >> အချစ်ရေးတွင် ချစ်သူကို အလိုလိုက်သလို မိမိအတွက်သာ အတ္တကြီးမိတတ်သည်။ တူရာသီဖွား >> အချစ်ကြီးသောသူနှင့် ဖူးစာဆုံရတတ်သည်။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား >> လောင်းကစားလုပ်ခြင်းကို အထူးရှောင်သင့်သော အချိန်ဖြစ်သည်။ ဓနုရာသီဖွား > > ရွှေငွေ ရတနာများ ရကိန်းရှိသည်။ မကာရ ရာသီဖွား >> အလုပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုက်နက်တည်း လုပ်တတ်သည်။ ကုမ်ရာသီဖွား >> မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာခြင်းက အောင်မြင်မှု ရရှိတတ်သည်။ မိန်ရာသီဖွား >> ငွေကံ အလွန်ကောင်းမည်။ [Zawgyi] အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့အ တွက် တစ်ရက်စာဗေဒင်ဟော စာတမ်း မိဿရာသီဖွား >> ပျိုရွယ်သူများအဖို့ အချစ်ရေး ကံကောင်းမည်။ ပြိဿရာသီဖွား >>…
ဇွဲကပင်အသင်းကို ရောင်းချခဲ့ပေမယ့်ဘောလုံးရာသီတစ်ခုအပြီးမှာပဲ တိုးတက်လာတဲ့ ခြေစွမ်းတွေကြောင့် ရန် ကုန်အသင်းရဲ့ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရသူပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးရာသီဒု-ကျော့မှာ ဇွဲကပင်အသင်းထံ ရောင်းချခဲ့တဲ့ ကစားသမားဟောင်း ကြည်လင်းကို ရန်ကုန်အသင်းက တစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီလို့ အသင်းရဲ့ တရားဝင် လူမှုစာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြလာပါတယ်။ ကြည်လင်းကတော့ ၂၀၁၉ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဘောလုံးရာသီမှာ ဇွဲကပင်အသင်းနဲ့ အတူ ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေ သွင်းယူနိုင်ခဲ့မှုကြောင့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပင် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံလာခဲ့ရသူပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ရန်ကုန်အသင်းက သူတို့ရဲ့ ကာလရှည် ကစားသမားဟောင်းကြည်လင်းကို အသင်းအတွက် ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ ရန်ကုန်နဲ့ ပြန်လက်တွဲခွင့်ရလို့ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ အကောင်းပေးမယ်လို့ ကတိပေးနိုင်ပါတယ်။ လာမယ့် ပွဲတွေအတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာလည်း ကောင်းကောင်း သိရှိထားလို့ သေချာပြင်ဆင်ပါ့မယ်။” လို့ ကြည်လင်းက ရန်ကုန်အသင်း မီဒီယာကို ပြောသွားပါတယ်။ ကြည်လင်းကတော့ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် စတင်ချိန်ကတည်းက ရန်ကုန်အသင်းမှာ ကစားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကို သက်တမ်းလိုက်ကနေ စီနီယာအသင်း ထိ ပါဝင်နိုင်ခဲ့သူပါ။ ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ ၂ နှစ်လောက် အဆက်ပြတ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ တော့ ၂၀၂၃ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲအဖြစ် ကာဂျစ်နဲ့…
ဘာလုံးအားပေးသူပရိသတျတှကွေားမှာ မိနျးမခြောပရိသတျတှရှေိနတောကလညျး ဘောလုံး ရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုတဈခုပဲ မဟုတျလား။ ဘောလုံးပှဲပွသစဉျအတှငျးမှာလညျး ကငျမရာမနျးတှကေ ပရိသတျတှကေို ရိုကျပွရငျ မိနျးမခြောလေးတှကေို အဓိကဦးစားပေးရိုကျပွလေ့ရှိပါတယျ။ စက်ကနျ့ပိုငျးလောကျသာ ကွာမွငျ့ပမေယျ့ အဲဒီအခိုကျအတနျ့ဟာ ကြှနျတောျတို့ရဲ့စိတျအမောေွ ပခဲ့တာကတော့ အမှနျပါပဲ။ ဒါဆို အဲဒီလို Sexy အကဆြုံးမိနျးမခြောလေးတှကေို ဘယျအသငျး က ပိုငျဆိုငျထားလိမျ့မလဲ။ Free Super Tips က ထူးခြားတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုကို ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်အသင်းက Sexy အကျဆုံးမိန်းမချောလေးတွေကို အများဆုံးပို င်ဆိုင်ထားတာက ဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလိုကောက်ယူတဲ့နေရာမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်လီဗာပူးအသင်းက Sexy အကျဆုံး မိန်းမချောလေးတွေကို အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အမှတ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ (၂၆) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယနေရာ တာ့ ချဲလ်ဆီးက (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ အင်္ဂလန်ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မိန်းမချောလေးတွေကို အများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့တတိယမြောက်အသင်းအဖြစ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အာဆင်နယ်၊ ဘန်လေ၊ စပါး၊ ဘရိုက်တန်၊ မန်စီးတီးအသင်းတို့က အစဉ်လိုက် ရပ်တည်ခဲ့ကြပြီး မိန်းမချောလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းဆုံးအသင်းအဖြစ် ဆောက်သမ် တန် ကရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လီဗာပူးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အန်ဖီးလ်ကွင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖန်သားပြင်ရှေ့မှာပဲြ…